SIDA LOO DHIGO MALAYGA (ROOTIGA IYO CALEEMAHA) JIILAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Ma jabin karaa xididka iyo caleenta malayga ee qaboojiyaha
Fasaxyada feerka waxaa badanaa loo isticmaalaa karinta. Xidigga waxaa loogu talagalay diyaarinta suugada kala duwan iyo cunto fudud, iyo caleemaha waxay ku badan yihiin caanaha iyo kariska. Dad badan ayaa is waydiin kara haddii ay suurtogal tahay in la hakiyo fawaakihadda xilliga jiilaalka. Marka xigta waan ka hadli doonaa.
Miyuu nafaqo yareeyaa marka la qaboojiyey?
Horsaatka waxaa ku jira fitamiino badan (C, E, PP, Koox B) iyo macdan (macdan, potassium, magnesium, kalsiyum, fosfooraska, sodium), taas oo saameyn togan ku leh jirka, iyo saliida lagama maarmaanka ah, taas oo siinaysa khudradda dhadhan gaar ah. Marka lagu qaboojiyo dhammaan nafaqooyinka ayaa la keydiyaa. Waxaa intaa dheer, barafka ayaa ku siin doona "bonus" kale oo fiican - xididdada la dhalaalay ma sii dhalinayso ilmo ay ku socdaan inta lagu jiro wax-soo-saarka, iyo dhadhanka iyo urta ma noqon doonaan wax ka xun wax soo saarka cusub.
Waxaa ka mid ah dhammaan hababka soo go'idda khudradda xilliga qaboobaha, barafka ayaa ah midka ugu habboon, xalka ugu fiican oo degdeg ah. Sidaa waxaad badbaadin kartaa: yaanyada, digir cagaaran, ukunta, bocorka, sprouts, broccoli, galley iyo cagaarka.
Si aad u keydiso xididada waxay u baahan tahay in si fiican loo xushay, waa inay noqdaan kuwo xoog leh oo aan waxyeello lahayn. Ka hor intaadan u dirin inay qaboojiso, ku nadiifi mindi ama khudradda qudaarta (haddii xididku weyn yahay). Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad biyo ku qoyso dhowr saacadood, ka dibna maydho - waxayna diyaar u yihiin inay barafoobaan.
Ma taqaanaa? Sababtoo ah xaqiiqda ah in sheygani yahay aphrodisiac, England waxaa loo naaneesay "dabayl fardaha."
Sida loo dhigo xididdada malayga
Waxaa jira cuntooyin dhowr ah oo loogu talagalay feeraha si loo yareeyo jiilaalka. Waxaa lagu kaydin karaa labadaba guud ahaan iyo qaabka qaybaha, foomka dufan leh, ama isla markiiba diyaariso xawaashka.
Tixgeli sida loo kaydiyo malayga xilliga jiilaalka qaboojiyaha ee qaabka qaybaha.
Ka hor inta aan la qabin rhizomes, si fiican u nadiifi dhulka.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u dhaqdid.
Iska yaree dhawr mitir oo mitir.
Ku rux bac caag ah oo ku riday qaboojiyaha.
Waa muhiim! Ha shubin badeecada ka hor inta aan la jiidin Booqday Furimaha Dagaalka hilibka.
Xidho xididdada leh Booqday Furimaha Dagaalka hilibka ama huurka.
Ku duub bac caag ah.
Way fiican tahay in la isticmaalo blender, maaddaama lamaanaha oo dhadhan khudraweyn, indhaha u hayo, iyo sababta oo ah way adagtahay in la neefsado.
Waa muhiim! Haddii aad isticmaasho Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah, ka dibna waa inaad xirto baakad ku taal. Tan waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo in uumiga uu u yaryahay sida ugu macquulsan.
Isku qas cunto
Ka badbaadi malayga cusub malayga sida dhirta ama suugada. Mid ka mid ah hababkaan waa hindisaha xididka leh tufaax iyo liin.
Apple iyo xididada waa in la qaato isla tirada isla markaana isku qasan shaaha liin ah.
Marka xiga, isku darka isku darka bukaanka ama xirmo.
Haddii aad doonaysid in laguugu kaydiyo boorso, markaas isku darka waa in lagu faafaa lakabka khafiifka ah.
Ka dib markii ay dhammaantood qaboobeen, isku darka walxaha ku rid bac ama qashin.
Sida loo dhigo caleemaha malayga
Cagaarka ayaa aad muhiim u ah marka la karinayo, waana in had iyo jeer ku jirtaa qaboojiyaha. Caleemaha dhirta ayaa si wacan loogu daraa suxuunta hilibka. Waxaad ku dari kartaa maraq iyo isticmaalida diyaargarowgooda. Intaa waxaa dheer, waxay si fiican u ilaaliyaan qajaarka pickled ka soo caaryaal.
Si aad u yareyso caleemaha aad u baahan tahay si aad u dhaqdo.
Ka dibna qalal.
Ku balaarin baakooyinka.
Ha ku daboolin markaad isticmaalayso kariska.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato raashinka ugu fiican ee xilliga qaboobaha: cagaarshaha, toonta, dhir, dill, isbinaajka, sorrel, cilantro iyo cadaadiska.
Ku saleysan kaydinta muddada dheer waa ilaalinta joogtada ah ee heerkulka. Haddii ay tahay -18 ° C oo aan waxba isbeddeli doonin, markaa banaanku wuxuu ku seexan karaa qaboojiyahaaga illaa hal sano.
Fidinta malayga - tani ma aha geedi socod adag. Hase yeeshee, waxaad heli doontaa caleemaha cusub iyo xididdada xilliga jiilaalka iyo banaanbaxyada kala duwan ee raashinka iyo suugada. Nasiib wacan